VESTIGE Printed Knapsacks Bag - Blue: Buy Sell Online @ Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
VESTIGE Printed Knapsacks Bag - Blue
Product details of VESTIGE Printed Knapsacks Bag - Blue
Cow Leather + Canvas fabric + Leather string & Recycle potato sacks
Specifications of VESTIGE Printed Knapsacks Bag - Blue
????????????? ???????????? ???????????? - ?????????
Ratings & Reviews of VESTIGE Printed Knapsacks Bag - Blue
by စိတ်ချမ်းသာတယ် Verified Purchase
အိတ်ကတော့ ဘယ်ချိန်ထဲက ဂိုဒေါင်မှာ သိမ်းထား တာလဲ သိဘူး ပစ္စည်းရောက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဖုန်တွေဆိုတာ ခါထုတ်တာတောင်မကုန်လို့ အဝတ်နဲ့ သုတ်ရလောက်အောင် မနည်းမနောဘဲ။ ကလပ်တခုလဲ ပြုတ်နေတာ အလုပ်မရှုပ်ချင်လို့မလဲတော့တာပါ။ ဝယ်လိုက်ရတာပစ္စည်းက ဂိုဒေါင်ရှင်းများတောင် ထင်ရတယ် LOL
ဒီဇိုင်းကတော့ အရမ်းမိုက်တယ်။ အိတ်ကလဲ ကြီးတော့ ခရီးသွားရင်တောင် ယူသွားလို့အဆင်ပြေတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာ ရှေးဒီဇိုင်း ကျောပိုးအိတ် - အပြာရောင်>>>ထည့်ရတာလည်းအရမ်းဆန့်ပါတယ်၊ပုံစံလေးလဲအရမ်းဆန်းလို့ကြိုက်ပါတယ်
vestige က အိတ်ဒီဇိုင်းက အရမ်းလန်းတယ် leather နဲ့ ဂုန်နီအိတ်ကိုပေါင်းပြီးချုပ်ထားတာ အကြမ်းလည်းခံ ခိုင်လည်းခိုင်တယ်